भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी भन्छन् : अब नेपालमा सुकुमबासी समस्या रहन् ! – Saurahaonline.com
भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी भन्छन् : अब नेपालमा सुकुमबासी समस्या रहन् !
प्रतिमा कुमाल, चितवन : भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले नेपालमा रहेका सुकुमबासी समस्या सदाका लागी अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज जिल्ला समिति चितवन गणेशथान भरतपुर ११ को आयोजनामा गरिएको सुकुमबासी समस्या समाधान सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रममा उहाँले अर्को आयोग बनाउन नपर्ने गरी सकुमबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रविबद्धता जनाउनु भएको हो ।
उहाँले नियमावली र कार्यविधि पारित भएपछि जिल्ला आयोग गठन गर्ने र सुकुमबासिको पहिचानका लागी काम अघि बढाउने बताउनु भएको छ । सुकुमबासीको पहिचानको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी भईरहेको ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारले दिएको विवरणमाथि नागरिक सुनुवाई गर्ने र त्यसपछि मात्रै जिल्ला आयोगले अन्तिम निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत हरनुभएका अध्यक्ष ज्ञवालीले बाढी र जनावारको आक्रमणको जोखिम रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर पूर्जा दिने समेत बताउनु भयो । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका २ का वडाध्यक्ष पूर्ण बहादुर श्रेष्ठ सम्पूण वडा वासीहरुको समस्या समाधानका लागी आफु जहिले पनि तयार रहेको बताउनु भएको भयो । नेपाल बस्ती संरक्षण समाजका जिल्ला अध्यक्ष छविलाल देवकोटाको अध्यक्षतचामा कार्यक्रम भएको थियो ।